मोटरसाइकल चालक सावधान ! ट्राफिकले ल्यायो जरीवानाको कडा निर्देशन - Suvham News
मोटरसाइकल चालक सावधान ! ट्राफिकले ल्यायो जरीवानाको कडा निर्देशन
तपाईंले सडक लेन मिचेर कसैलाई ठक्कर दिनुभयो ? सावधान, घाइतेलाई २५ हजार रुपैयाँ तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने पर्नेछ । यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ का केही दफा संशोधन गरी ५ हजार रुपैयाँको साटो २५ हजार रुपैयाँ तोकेको हो । कुनै चालकले सडक लेन मिचेर वा सडक अनुशासन उल्लंघन गरी दुर्घटना हुँदा कसैलाई घाइते बनाए उक्त क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ ।
‘२५ हजार रुपैयाँ सामान्य खर्च मात्र हो, तर औषधि उपचारमा जति खर्च लाग्छ त्यो सबै पीडकले तिर्नुपर्छ,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीआईजी प्रकाश अर्यालले भने, ‘त्यसैले अब सडकमा अनुशासित भएर सवारीसाधन चलाउन सुरक्षित हो ।’ त्यसैगरी सवारी दुर्घटनामा कसैको मृत्यु भए पीडित पक्षलाई सवारीचालक, सवारीधनी अथवा व्यवस्थापकले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनले बताए । क्षतिपूर्तिबापत तेस्रोपक्षीय (थर्ड पार्टी) बिमा नगराएको भए सवारीधनीले दुर्घटना बिमाबापतको रकमसमेत तिर्नुपर्ने छ । यसअघि किरिया खर्च र तेस्रोपक्षीय बिमाबापत सवारीधनीले १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
करिब ७ महिनाअघि उक्त दफा संशोधन भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा पुरानै दफाअनुसार प्रहरीले दण्ड, सजाय गर्दै आएको थियो । अर्यालले संशोधित ऐनअनुसार कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने तयारी भइरहेको बताए । ‘कानुनका विज्ञसँग परामर्श र सल्लाह गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयनको तयारीमा छौं ।’
ट्राफिक संकेत उल्लंघन, जथाभावी पार्किङ, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाए, जथाभावी रूपमा मोडे, गलत साइडबाट चलाए, ठीक कन्डिसन नभएको सवारीसाधन चलाए, निर्धारितभन्दा बढी गतिमा हाँके ५ सय, हजार र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । यसअघि २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान थियो । त्यसका साथै सयदेखि २ सय रुपैयाँ जरिवानाको सट्टा ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । राति बत्ती नबाली सवारीसाधन चलाए, मादक पदार्थ सेवन गरी चलाए, अरूलाई बाधा पुग्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गरे, निषेधित स्थानमा चलाए, नम्बर प्लेट नराखी चलाए, सिटबेल्ट नबाँधी अथवा हेल्मेट नललाई चलाए ५ सय, हजार र १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस्तै सार्वजनिक सवारी चालकले यात्री लिन इन्कार गरे, तोकेको भाडादरभन्दा बढी लिए, लाइसेन्स नलिई चलाए, बाटो इजाजतपत्र नलिई चलाए ५ सय, हजार र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
मोबाइलमा ट्रफिकबारे जानकारी
तपाईं ट्राफिक जाममा पर्ने डरले घर वा अफिसबाट बाहिर निस्कने/ननिस्कने दोधारमा हुनहुन्छ ? नडराउनुहोस्, अब बाहिर निस्कनुअघि तपाईंले मोबाइलमै जानकारी पाउनुहुनेछ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक मोबाइल एप्लिकेसन (एप्स) बाटै सम्पूर्ण जानकारी दिनेछ । कहाँ–कहाँ ट्राफिक जाम छ/छैन त्यो सबै थाहा पाउनु हुनेछ । मोबाइलबाटै तपाईंले देखेका/भोगेका तथा अन्य सूचना तथा तस्बिरसमेत ट्राफिक प्रहरीलाई पठाउन सक्नु हुनेछ ।
त्यसका आधारमा ट्राफिकले तपाईंलाई तुरुन्त त्यसको प्रतिउत्तर पठाउनेछ । महाशाखाका डीआईजी प्रकाश अर्यालले समयअनुसार ट्राफिकसम्बन्धी सूचना मोबाइल एप्स प्रविधिमार्फत दिइने बताए । ‘ट्राफिकसम्बन्धी सम्पूर्ण घटनाको विवरणसमेत पाइनेछ,’ उनले भने, ‘बाहिर निस्कँदा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो मोबाइलमा सवारी जामबारे चेक गर्न सक्नेछन् ।’ एप्सका माध्यमबाट उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनाबारे समेत तत्काल जानकारी पाउन सकिनेछ ।
ट्राफिक नियम मिचेर कोही भाग्न खोज्दै छ भने पनि यसबापत हुने दण्ड सजाय तथा जरिवानासमेत तुरुन्तै थाहा पाउन सकिने उनले बताए । यस्तै तत्काल ट्राफिक प्रहरीसँग सम्पर्क गर्नुपरे एप्सबाटै प्रहरीको नाम र नम्बर थाहा पाउन सकिनेछ ।
‘एक स्थानबाट अर्को स्थानबाट जाने सवारीसाधनको भाडादरबारे जानकारी पनि पाउन सकिन्छ । सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्रको समेत मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सकिनेछ । सवारीसाधन हराए वा पाएमा तत्काल एप्सले सूचना दिनेछ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनभित्र कसैले दुव्र्यवहार गरे तुरुन्तै प्रहरीलाई गोप्य रूपमा सूचना पठाउन सकिनेछ । ट्राफिक जनचेतासम्बन्धी भिडियो, गीत तथा अन्य गतिविधिसमेत यो एप्समा उपलब्ध हुनेछ । साथै ट्राफिक एफएमसमेत सुन्न सकिने डीआईजी अर्यालले बताए ।
Prevयी हुन्, औषधि उपचारका लागि नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने रोगहरु
Nextसुनको भाउ आकासिँदै, आइतबार ५ सय रुपैयाँले बढ्यो